नागरिक न्युजमा प्रकाशित,११ असोज, नेपालगन्ज ।
नेपालगन्जमा १३ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन्। नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको छेउमै रहेको सुरेन्द्र होटल एण्ड लजमा विहीवार दिउँसो किशोरी बलात्कृत भएकी हुन्।
बालिका बलात्कारपछि हत्या गर्ने १२ घन्टामै पक्राउ
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित,११ असोज, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका–२२ पुम्दीभुम्दी कोदीकी १० वर्षीया श्रेया विक (सुनार)लाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने २७ वर्षीय कुसुम पौडेल १२ घन्टामै पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पौडेललाई पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
कञ्चनपुरमै १० वर्षीय बालकद्वारा ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित,५ असोज, कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरमै बलात्कारको अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–१ मा १० वर्षीय बालकबाट ६ वर्षीया बालिका बिहीबार बलात्कृत भएकी हुन् । विद्यालयमै दिउँसो बालिका बलात्कृत भएको अभिभावकले बताएका छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,५ असोज, रौतहट ।
झारफुक गर्ने बहानामा यहाँको बौधिमाई नगरपालिकामा एक बालिका बलात्कार भएकी छन् । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि एक बालिका बलात्कार भएकी छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,४ असोज, परासी ।
बालिका र किशोरीले आफूमाथि आक्रमण भए कसरी प्रतिरक्षा गर्ने ? पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीमा प्रतिरक्षा तालिम नै सुरु हुन थालेको छ । दिनदिनै बढेका हिंसा र बलात्कारका घटनाबाट जोगिन टोल–टोलमै यस्तो अभियान थालिएको हो ।
जलेश्वर नगरपालिकामा झाडापखालाको प्रकोप, एक बालिकाको मृत्यु
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,४ असोज, जलेश्वर ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका १२ नैन्हीमा झाडापखाला फैलिएको छ । झाडापखालाबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । झाडापखालाबाट बिरामी चार वर्षीया बालिका खुश्बु खातुनको उपचारका लागि जलेश्वर अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो ।
थाहा खबरमा प्रकाशित,४ असोज, उदयपुर ।
त्रियुगा नगरपालिका–७ कौवाईमा टिपरको ठक्करले एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा १२ वर्षीय रोशन कार्की मृत्यु रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पहिरोमा बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई राहत
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,४ असोज, ओखलढुंगा ।
सरकारले ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ८ मा पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारका आफन्तलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामार्फत मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
एसिड खन्याइएका ६ महिने बालकको मृत्यु
कान्तिपुरमा प्रकाशित,३ असोज, अछाम ।
एसिड खन्याइएका तुर्माखाद गाउँपालिका-४ चिसिका ६ महिनाका बालक मुस्कान बयकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । घरमा सुताइ राखेको अवस्थामा मंगलबार बिहान ११ बजेतिर एसिड जस्तै कोरोसिभ केमिकल अनुहारमा फ्याँकिएको थियो।
थाहा खबरमा प्रकाशित,३ असोज, लहान ।
सिरहा जिल्ला अदालतले १५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको कसुर ठहर गर्दै अभियुक्तलाई छ वर्षको कैद फैसला सुनाएको छ। जिल्ला अदालतले सिरहाको लहान नगरपालिका–१९ का १८ वर्षीय सुमन भनिने सुमन्तकुमार मण्डललाई मंगलबार बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुर ठहर गर्दै ६ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,३ असोज, चितवन ।
नवलपुरको बुलिङ्टार-६ अत्रौलीस्थित शिव माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले कुटेर विद्यार्थीको कान नै फुटाइदिएका छन् । निर्धारित समयभन्दा विद्यालयमा १५ मिनेट ढिला आएको भन्दै प्रध्यानाध्यापक ओमकुमार श्रेष्ठले कक्षा १० मा अध्ययनरत खुमान सार्की नेपालीलाई कुटपिट गरेका हुन् । घाइते खुमानको कानबाट रगत बगिरहेको छ ।
नुवाकोटका ३ किशोरी २ सातादेखि बेपत्ता
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,३ असोज, नुवाकोट ।
जिल्लाको तादी गाँउपालिका–१ उर्लेनी काल्चेका तीन किशोरी दुई सातादेखि हराइरहेका छन् । गत भदौ १८ गते तादी–३ खरानीटारमा लाग्ने श्रीकृष्ण जन्माअष्टमीको रथयात्राको जात्रामा सहभागी हुन गएका उनीहरु फर्केर घर नआएको भन्दै परिवारले खोजी गर्न प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
यी नौ महिने शिशुलाई कसले दिने न्याय
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,३ असोज, कञ्चनपुर ।
महाराजगंञ्ज शिक्षण अस्पतालको २०२ नम्बर कोठा। अस्पतालले दिएको कम्मल आधा शरिरमा ओढेर सुतिरहेकी छन् एक ९ महिने बालिका। उनले लगाएको रातो टिसर्टमा सिलिक्क परेको कपाल अझै आकर्षक देखिन्छ।
घर खोज्दै भारतबाट फर्किएका १० वर्षका बालक बालगृहमा
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,२ असोज, मोरङ ।
आफ्नो घर खोज्दै भारतबाट १० वर्षका बालक विराटनगर आइपुगेका छन् । नाम सुमन जोगी बताउने बालक रेल मार्ग हुदै विराटनगरसम्म आइपुगेका हुन् । सोमबार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पाइन्ट, गन्जी र खाली खुट्टामा देखिएका बालकलाई सोधीखोजी गर्दा नेपालस्थित घर हिँडेको बताएका थिए ।
म्याग्दीमा बढ्यो बलात्कारको घटना
कान्तिपुरमा प्रकाशित,२ असोज, म्याग्दी ।
म्याग्दी — बेनी नगरपालिका-५ घर भै आफन्त भेट्न अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घार पुगेकी एक १५ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी छन् । किशोरीसहित आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा जिल्लामा ४ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१ असोज, काठमाडौँ ।
कक्षा ६ मा पढ्दै थिइन् । सौता’ बनेर गइन् । ‘पढ्न किन आइनन् भनेर उनका सहपाठीहरूसँग बुझ्दा गाउँकै केटासँग सौतामाथि बिहे गरेको बताए,’ प्रधानाध्यापक टीकाराम मोक्तानले भने ।
जन्मिनेबित्तिकै छोराको घाँटी थिचेर हत्या
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,१ असोज, धरान ।
धरानमा अवैध यौन सम्पर्कबाट जन्मेको नवजात छोराको हत्या भएको छ । धरान–१० स्थित नारायण चोकमा मजदुरी गर्दै आएकी २० वर्षीय अस्मिता चौधरीले छोरालाई जन्माउनसाथ हत्या गरेकी हुन् ।